स्टीव जॉब्स: फोकस, भिजन, डिजाईन Martech Zone
आइतबार, डिसेम्बर 18, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
शुक्रबारको पोडकास्टमा हामीले यस बर्ष पढेका उत्कृष्ट पुस्तकहरू छलफल गरेका थियौं र टाढासम्म मेरो मनपर्दो थियो स्टीव जर्नल। मैले हालसालै धेरै पढेको छैनँ - म धेरै आभारी छु जेन मेरो लागि पुस्तक किन्नको लागि!
पुस्तक नौकराहरूको लागि प्रेम-फेस्ट होइन। वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यसले सन्तुलित तस्बिर भुक्तान गर्दछ जहाँ जॉब्सको गिरावट उसको अत्याचारी नियन्त्रण मुद्दाहरू थियो। म भन्छु अत्याचारी किनभने यसले उसको स्वास्थ्य, उसको परिवार, साथीहरू, आफ्ना कर्मचारीहरू र व्यापारमा यसको प्रभाव पारेको थियो। धेरै व्यक्तिहरू एप्पललाई आश्चर्यमा हेर्छन् ... ग्रहको सब भन्दा मूल्यवान कम्पनीका रूपमा। जे होस्, त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष थियो ... एप्पलले एक पटक पीसी उद्योगमा नेताको रूपमा शासन गर्‍यो र त्यसपछि आफ्नो खुट्टा गुमायो।
नकारात्मक को पर्याप्त… जागिर वास्तव मा एक अद्वितीय मानव थियो। उनको लेजर फोकस र दृष्टि, डिजाइन मा आफ्नो uncompromising स्वाद संग संयुक्त आफ्नो कम्पनी वास्तवमा अद्वितीय बनायो। रोजगारले डेस्कटप कम्प्यूटर उद्योग, डेस्कटप प्रिन्टिंग उद्योग, संगीत उद्योग, एनिमेटेड चलचित्र उद्योग, फोन उद्योग र अब ट्याब्लेट उद्योगलाई रूपान्तरण गर्‍यो। यो केवल डिजाइन मात्र थिएन, उसले वास्तवमै ती व्यवसायहरूलाई वास्तवमै काम गरेको तरीकामा परिवर्तन गर्‍यो।
एप्पलले खुद्रा स्टोरहरू खोल्दैछु भनेर बताउँदा म आलोचकहरू मध्ये एक हुँ। मैले सोचे कि यो पागल हो ... विशेष गरी जब गेटवेले उसको बन्द गर्दै थियो। तर के मैले बुझिनँ कि खुद्रा स्टोरहरू उत्पादन बेच्ने बारेमा थिएनन, उनीहरू उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्थे जुन गरीवहरू उनीहरूलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईं एक एप्पल स्टोर मा जानु भएको छैन भने, तपाईं वास्तवमै यो जाँच गर्नु पर्छ। यदी तपाई एक बेस्ट बाय हेर्नुहोस् भने पनि तपाईले देख्नुहुनेछ कसरी एप्पल बिभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ।
वाल्टर आइज्याक्सन एक अद्भुत कथाकार हो र म यो पुस्तक खोल्ने बित्तिकै चिप्लिए। त्यहाँ हामीले सबैले देखेको जागिरहरूको क्यारिकेचर थियो, तर पुस्तकले एकै कोठामा भएका मानिससँग अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट यति धेरै अविश्वसनीय विवरण दिएको थियो। यो पुस्तक निर्दोष छ जस्तो छैन, यद्यपि। फोर्ब्स हालसालै एक धेरै फरक छ सोच विभिन्न अभियानको बारेमा कहानी.
व्यक्तिगत रूपमा, सन्देश म संग टाढा हिँडेको छ कि सफलता को लागी पनी छ जब तपाईं आफ्नो दृष्टि पीछा मा अथक हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि हाम्रो आफ्नै व्यवसाय मात्र सफल छ जति हामी आफ्नो ग्राहकहरु लाई महान सेवाहरु प्रदान गर्न को लागी समर्पित छ। मलाई पक्का यकिन छैन कि म त्यती त्याग गर्न तयार छु जस्तो गरी त्यहाँको रोजगारले त्यहाँ पुग्यो। एक अर्थमा उसले धेरै लडाईहरू जितेको हुन सक्छ, तर मलाई पक्का विश्वास छैन कि उनले यो युद्ध जितेका थिए।
मलाई तपाईंको विचारहरू पुस्तकमा सुन्न मन पर्छ!
टैग: स्टीव कार्यहरू
अवतार ब्रान्डि Cold: चिसो वा रचनात्मक?